”Reer Galbeedku nabad waxay u yaqaannaan wixii dantoodu ku jirto, qofkii diidana waa dagaal” – Andre Vltchek (Qaybtii 5-aad) | Hadalsame Media
”Reer Galbeedku nabad waxay u yaqaannaan wixii dantoodu ku jirto, qofkii diidana waa dagaal” – Andre Vltchek (Qaybtii 5-aad)
(Nairobi) 08 Juun 2018 – Nabadi waa marka ay dhakhaatiirta ciidamada Maraykanku ay dadka aadka u buka ee dawaynta u baahan ee reer Haiti ku dawaynayaan bannaanka isku raranta Cité Soleil.
Waxaan arkay oo aan weliba sawir ka qaaday haweenay lagu dabiibayo miis kabkab ah, iyadoo lagu sameeynayo qalliin lagaga soo saaray buro balse la adeegsanayo suuxin aan ku fillayn oo meesha la qalayo uun ah (local anesthetics).
Waxaan waydiiyay dhakhaatiirtii askarta Maraykanka, maxaad sidan u yeelaysaan? Waxaan ogahay inuu laba daqiiqo u jiro isbitaal wayn oo ay leeyihiin isla ciidamada Maraykanku.
“Tani waa fursada aannu ugu dhowaan karno xaalad dagaal”, ayuu hal dhakhtar ku warceliyay, daacaddii. “Annaga, waxani waa noo tababar.” ayuu daba dhigay.
”Kaddib markii uu qalliinkii dhamaaday, haweenaydii waa ta istaagtey, iyadoo taageeranaysa ninkeedii oo naxsan, waxayna u luudeen dhanka boosteejadii basaska.”
Haahay, waxan oo dhami, rasmiyan, waa nabad.
Intii aan ka shaqaynayay, daafaha ay dagaalladu balanbaliyeen ee caalamka, waxaan kusoo arkay kun waxyaabood oo ka kurbo badan midda aan kor kusoo sheegay, dabcan wax badan.
Waxaa oo dhamina waa ”nabad” aan ku arkayay hilbo googo’an, muddullo gubanaya, haween caalwaa la barooranaya, ama carruur cudurro ama cunto la’aan u go’aysa kahor inta aanay qaan gaarin.
Marka aad qabato waxa aan qabto, waxaad tahay dhakhtar oo kale: Waad u gigsanaysaa cabsidaa iyo silacaa, maxay yeelay waxaad halkaa u tagtay inaad wax caawiso, runta sheegto, oo aad dunida ku ceebeyso arrinkaa. Xaq uma lihid inaad inta dhulka isku dayso ooyin iskala dhacdo.
La soco qaybta 6-aad…
Dhakhaatiirta ciidamada Maraykanka oo cirkoo bannaan ku dawaynaya haweenay bukaan ah oo Haitian ah.
Previous articleSOOMAALIYA: Afarta gobol ee wax heshay & afarta la helay (Qalinkii Yahya Amir)